एउटा सचिव तयार पार्न राज्यको ९ करोड खर्च, अरु कर्मचारी उत्पादनमा कति ? — Newskoseli
एउटा सचिव तयार पार्न राज्यको ९ करोड खर्च, अरु कर्मचारी उत्पादनमा कति ?
निजामती किताबखाना, लोकसेवा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग यस्तो विवरण छैन । लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य मधुरमण तिवारीले १६ वर्ष अगाडि गरेको अध्ययनमा खरिदारबाट प्रवेश गरेर सचिव हुँदासम्म एउटा कर्मचारीलाई राज्यले करिव ३ रूपैयाँ करोड खर्च गरेको हिसाब निकालेका थिए ।
त्यो तलब बाहेकको खर्च हो । सो खर्चमा उसको गाडीलगायत मन्त्रालयमा पाउने सुविधा, विभिन्न शीर्षकका भत्ता, विदेश भ्रमण, तालिम, अध्ययनलगायत शीर्षकका थिए । उनले लोकसेवामा विभिन्न कामले पुगेका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेर त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको बताए ।
तर, त्यसयता त्यस्तो अध्ययन भएको छैन । १६ वर्षअघिको अध्ययनको समयमा भन्दा अहिले कर्मचारीको विदेश भ्रमण, विभिन्न तालिम र अध्ययनमा हुने खर्चमा कयौं गुणा वृद्धि भएको छ ।
तर, अनुभवी बनाइएका कर्मचारीलाई धनराशिसहित बिदा गरेर राज्यले फेरि नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने बाटो रोजेको खबर सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।